Naannoo Somaalee: Jeequmsa Adoolessa 27 mudateen namoonni 96 ajjefaman - BBC News Afaan Oromoo
Naannoo Somaalee: Jeequmsa Adoolessa 27 mudateen namoonni 96 ajjefaman
Madda suuraa, Fana
Jeequmsa qindaa'aa Adoolessa 27 magaaloota gurguddoo Naannoo Somaalee Itoophiyaatti umamee tureen lakkoofsi dhalattoota naannolee biroo guyyaa tokkotti ajjeefamanii 96 akka ta'e Komishinarri Komishinii Poolisii Federaalaa Zeeynuu Jamaal himan.
Qabriidahaar, Waardeer, Godee fi magaalaa guddoo naannichaa Jigjigaan bakkeewwan lubbuun namootaa itti galaafatame keessaa akka ta'an eeraniiru.
''Halli namootni kun itti ajjeefaman sukkanneessaadha. Gosa ajjeechaa dhalli namaa raawwachuu danda'u miti,'' jedhan Komishinar Zeeynuun.
Ajjeechaan raawwatamee fi badiin gahe amantaa, gosaa fi naannoo irraa dhufan adda baasuun kan raawwatame fakkaata ''Sanyii balleessuun gaditti kan ilaalamu miti'' jedhan.
Jigjigaatti jiraattonni nyaataa fi bishaan dhabuu himan
Abdii Mohaammad Omaar to'annoo jala oolan
''Hooggansi naannichaa duraanii itti yaaduun dargaggoota kana raawwachuu danda'an qindeessee fi leenjisee kan raawwatameedha'' jedhaniiru.
Yakka kana keessaa harka qabu jedhamanii kan shakkaman pireezidantii naannichaa duraanii dabalatee namoonni torba to'annoo jala akka oolaniis Komishinar Zeeynuun himaniiru.
Gochi kun namoonni hedduun kan keessatti hirmaatan waan ta'eef hojiin namoota shakkaman seera jala oolchuu itti fufas jedhaniiru.
Yakkoota kana keessatti adda durummaan kan hirmaata garee dargaggootaa ''Heegoo'' jedhaman akka ta'es dhugoomsaniiru.
"Magaalota Jigjigaafi Dirree Dhawaatti lubbuu darbeen gaddineerra" - MM Abiy Ahimad
''Kaayyoon keenya inni jalqabaa namoota yaada garee kana ijaaruu maddisiisan, qindeessan, karoora isaa baasan harki caalaan isaanii hooggantoota olaanoo naannichaa ta'an to'annoo jala olchuudhas'' jedhaniiru.
Yakkoota kan keessatti poolisiin addaa naannoo Somaalee hirmaannaa qabaachuu fi dhiisuun qoratamaa waan jiruuf ''amma homaa jechuun hin danda'amus'' jedhan.
Amma nageenyi magaalaa jigjigaa humna poolisii Federaalaa naannicha keessatti bobba'een tikfamaa gara nageenyaatti deebi'aa jiraatus itti nageenya waaraa fiduuf hojiin dabalataa nageenya mirkaneessu ni hojjetama jedhan.